MOTO HALATRA MIISA 17 TRATRA : Naiditra am-ponja vonjimaika ny 5 tamin’ireo jiolahy tao Antsiranana
Nahitam-bokany ny fikarohana nataon’ny polisy tamin’ireo tambajotra mpangalatra moto aty Antsiranana. Araka izany dia moto halatra miisa 17 no tratra ary olona miisa 10 no voarohirohy. 9 avril 2019
Ny talata 9 avrily teo no natolotra ny fampanoavana izy ireo ka naiditra am-ponja vonjimaika ny dimy. Raha tsiahivina dia nisy tovolahy iray nangalatra moto teo amin’ny lalana Sainte Marie taty Antsiranana, ny alakamisy 4 avrily lasa teo. Nisy nahatsikaritra izany ka avy hatrany dia nanara-dia nanenjika azy ny fokonolona tamin’ny manodidina niaraka tamin’ilay moto.
Tsy tonga lavitra akory ilay mpangalatra moto dia tratra ka noraisin’ny polisy. Tamin’ny fanadihadiana sy fikarohana nataon’ny polisy no nahatrarana ireo tambajotra mpangalatra moto. Nahitana mpanamboatra moto, mpividy ary ny mpandraharaha manome faktiora an’ireo mpivarotra moto halatra ireo. Ity farany dia anisany nahazo fahafahana vonjimaika. Azo ambara fa toa voasivana ireo naiditra am-ponja ireo. Manao ny asany ny polisy amin’ny fisamborana fa ny Fitsarana no tompon’ny teny farany.